» Qaadiroow Midkii Khayr ku Jiro, Qoomka ku Badbaadi, Gabay ku Socda Musharixiinta, by M Xaaji
Wareysi Abwaan Maxamed Cumar Nadaam
Wiil Soomaali ah oo Dabaq iska soo tuuray Talyaaniga
Ilyaas Barre Shiil oo Beesha Hawiye Weeraray
Xildhibaan Ilyaas Barre Shiil oo si Bareer ah u weeraray Beesha Hawiye + Daawo VIDEO
Sheekh Caalamka laga qadariyo oo Fanaanad caan ah codsi u diray, Toloow Muxuu ka codsaday..?
Wiil 20 Jir Soomaali ah oo Dabaq ku yaala Talyaaniga iska soo tuuray kadibna dhintay Sababtu mexey tahay..? + VIDEO
Wareysi Cajiib ah oo lala yeeshay Abwaan Nadaam ( Ma ogiye Jaceyl waa Maxay ) Qeybta Koobaad + DHAGEYSO
5 Qof oo Kismaayo lagu dilay iyo dagaallo laga baqayo
Qaadiroow Midkii Khayr ku Jiro, Qoomka ku Badbaadi, Gabay ku Socda Musharixiinta, by M Xaaji
Aug 25, 2012 - 1 Jawaab	Qarankii jabee aan la helin, Kaadir qalab qaata.
Umaddii qaxdee aan la hanan kala qorsheynteeda.
Madficii qarxee aan la huwin, Qaaya nabadeedba.
Qabyaalladii dhacdee aan la hubin, Halista qiiqaysa.
Qabtii qarni-biloowgaan ka nahay, Qulubka koowaade.
Qulubkiyo khilaafkaan ka nahay, Qaybta koowaade.
Quruumaha aduunkaan ka nahay, Qaati iyo dayro.
Qaaradda Afrikaan ka nahay, Waxaan qiyaasneyne.
Qaadiroow midkii khayr kujiro, Qoomka ku badbaadi
Nus-Qarni ku dhowaad waxaan ahayn, Qax iyo baaruude.
Isma qabato aan qiil lahayn, Baa dantii qubaye.
Qarax iyo in lays qoonsadaan, Qiime moodnaaye.
Siyaasiguna waa kii qoqobay, Qarankii Soomaale.
Umaddii qabiil bay bareen, Qoqobya qaan baase.
Iska qaado qaataye, ayay nagu khasbaayaane.
Danohooda khaaskay rabaan, Inaan ka qaadnaaye
Anaguna qaran baan rabnaa, Cisiyo qaanuune.
Caana daatay dabadood la qabay, Waa dabuub qorane.
Qab qab dhaafay waa waxan Qarnigan, isku khilaafnaaye.
Dad- qalatadu ma joogteen, Hadaan qiime leenahaye.
Dhurwaa lama qasheen haduu qoonkayagu, Diinta qaataaye.
Qurba joog kama door bidneen, Qaranki waynaaye.
Deriskeenna kama qaadaneen, Cashar qaraar badane.
Daneheenna lama qaayibeen, Quus sidaan nahaye.
Qoowlkii Jaarlees Digool, Baan ku qiil ahaye.
Qaran waliba hogaanka u qalmuu, Qaado leeyahaye.
Calool waliba quudkeey cunteey, Qarasteed leedahaye.
Umadaan qiyaamaha korkeed, Laga ridee qaawan.
Hadii aynaan qabaliyiin ahayn, qaxar ma joogneene.
Gayigeennii qurxoonaa nin kale, Shan uma qaybsheene.
Danaheena khaaska ah dagaal, Laguma qaadeene.
Khayraadkiyo badahaan lahayn, Lama qiyaasteene.
Masiirkeennii qaranimo qiime jaban, Lagama qaateene.
Qoqobkiyo qabyaaladda xun baan, Qiime moodnaaye.
Qaadiroow midkii khayr kujiro, Qoomka ku badbaadi.
Qalinkii Maxamed Xaaji Xuseen Raage.
Nagula soo xiriir Wararka@hotmail.com.
« Warbixinta Ka HoreysayXaaladda Nimco Dareen Waa sidee kadib dhaawicii soo gaaray?	Warbixinta Xigto »Ciidamada huwanta oo ku sii siqaya magaalada Kismaayo	One Response to Qaadiroow Midkii Khayr ku Jiro, Qoomka ku Badbaadi, Gabay ku Socda Musharixiinta, by M Xaaji
Cali maxamuud cali says:	September 8, 2012 at 2:26 pm	Somalia waxa waye wadan dhibato culus somaray dhibatadane waxa ka sari karo allah rajada ey ledahay hadertan waxa eey ku wanagsaneeyd in loo dhibo in wayo arag ah oo so qabtay xilal kala duwan ah ne nin quburo ah ahne nin barfasor ah layaqano ah an aheyn caloshis ushaqeyste sidi kuwii nawareeriyay 20 kiisano waxan ka cabsanaa hadi raga qar eey helan codadka in dhibato ciyon ey suli weyso allow nosahal midan ku dirsano ahne mid wayo arag ah
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Fikradaha Akhristayaashaabdi baydhabo on Xafiiska UNSOM oo laga soo horjeestay in laga furo magaalada Hargeysaosman on Madaxweyne Xasan oo Jakob Zuma Kala hadlay dilka loo geysto Soomaalida + SAWIRROSomali on Mooshinkii laga keenay ciidamada Kenya oo dib loo dhigayAbraar on Williom Ruto oo jeediyay hadal taabanaya Soomaalida qurbo joogta ahAbraar on Maxay dowladaha Talyaaniga iyo Ethiopia ka wada yiraahdeen arimaha Somaliamidnimo on Madaxweynaha Somalia Oo La Kulmay Madaxweyne Ku Xigeenka Kenya Iyo Wafuud Kalemidnimo on Madaxweynaha Somalia Oo La Kulmay Madaxweyne Ku Xigeenka Kenya Iyo Wafuud Kalemidnimo on Mooshinkii laga keenay ciidamada Kenya oo dib loo dhigaymidnimo on Mooshinkii laga keenay ciidamada Kenya oo dib loo dhigaymidnimo on Mooshinkii laga keenay ciidamada Kenya oo dib loo dhigay	© -2013 muqdishonews.com. All rights reserved.
Design by Kalafoge Designer.